Sida loo Tranfer Lugood eBooks in Android
Waa maxay sababta ayan macquul aheyn in shuban iyo akhriyo eBooks Lugood ee Android?
Helitaanka qalabka cusub Android ku siin karaan waayo-aragnimo la yaab leh, sababta oo ah noocan ah qalabka ma aha oo kaliya siinayaa ah mid ka mid ah hab noocan ah inay ku shuban eBooks iyo akhriyo, laakiin waqti isku mid ah aad heshid waayo-aragnimo ka duwan macruufka ah karti qalab aad hore u lahaa. Lahaanshaha telefoonka ah Android waa mid aad waxtar u leh maadaama ay maamushaa in badan oo ka mid waafaqsan keeno noocyada badan oo files iyo waqti isku mid ah waxaa ku siinayaa, habka xiddig weyn oo shaqo lagu sameeyey hab wax ku ool ah u hesho.
Nasiib darro, ma jirto hab toos ah si ay u gudbiyaan ah eBooks Lugood in Android la dhamaystiran hufnaan, iyo sababta oo ah in aad leedahay si aad u hesho bedelkiisa. Tani waa wax xun oo uu ugu yaraan ka, sababta oo ah isagoo hab xirfadeed si ay hawshan u noqon doono taam ah aad u fiican, weli halkii aad leedahay si la helo qalab dhinac saddexaad in ku siin doonaa caawimaad hugaaminaya arrintan la xiriira qaban.
Laakiin maxay tahay sababta sababta maxaa yeelay, ma aad awoodi karaa inuu wareejiyo eBooks Lugood in Android? Tani waxay hubaal ka yimaadaa xaqiiqada ah in dhufto ee Android iyo macruufka leeyihiin nidaamka lacag bixinta oo kala duwan, iyo waqti isku mid ah ay la yimaadaan hab oo kala duwan si aad u iibsato buugaag. Sababta oo ah in, ay sidoo kale soo set oo kala duwan oo DRMs, wax u adag tahay in aad beddesho ka mid madal in kale. Kuwani waa sababaha ugu weyn ee sababta wareejinta ebook Lugood ah in ay Android ku dhow yahay inuu wax aan macquul aheyn. In kasta oo ay tahay in, iyadoo hal-abuurka yar oo ah waxoogaa fikrado, aad ku xidhan si aad u hesho waayo-aragnimo ah xiddig iyo natiijada lama ilaawaan ah si dhakhso ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in la helo barnaamijyadooda habboon in haboon baahidaada.
Ma jiraan qaar ka mid ah Chine in ii caawin karaa?
Dhab ahaantii, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad samayn karto si ay u soo diri faylasha aad u baahan tahay mid ka mid madal in kale, balse waxan sameeyo waxay u baahan yihiin qayb ka mid ah gumaarka ah, si aad u baahan tahay dulqaad qaar ka mid ah haddii aad doonaysid in aad isku daydid wax sidan oo kale . Dhinaca kale, natiijooyinka si fiican u qalantaa oo dhan aad u baahan tahay waa in ay waqti ka mid ah, sababta oo ah natiijada si fiican u qalantaa in dhamaadka, oo aad loo xidho si loo qadariyo natiijada mar walba.
Agabka ugu horreeya ee aad u baahan doontaa in aad isticmaasho waa Marvin, maadaama ay tani kuu ogolaaneysaa in aad si buuxda u dajiyaan aad buugaagta maktabadda Lugood rogtid oo aad iPhone. Codsiga waxaa loo abuuray sidan oo kale si ay u bixisaa interface hugaaminaya, casriga ah iyo waxa daahirka ah, iyo waqti isku mid ah ay kor u furmay qaabab kala duwan. Waxa kale oo ay bixisaa tiro balaadhan oo ah noocyada, haya'ad xirfadeed iyo qaabka weyn ka dhigaya isticmaalaya app si fiican u qalantaa.
Faa'iido: fudud An in ay isticmaalaan interface iyo taageero qaabab kala duwan, soo jeeda weyn iyo iminka qalab aad u isticmaali karto waqti kasta.
Qasaarooyinka: Ma furi kartaa files EPUB ilaaliyo.
Aldiko waa akhristaha ugu weyn buug oo aad ka heli kartaa madal ay Android, oo ay u mahad aad si fudud u furi kartaa tiro balaadhan oo ah files xiiso leh in aad ku xidhan in jeclaan hubaal. App wuxuu kuu ogol yahay in ay caleenta iyo soo bixi kun oo classic, iyo waqti isku mid ah u siisaa, eegtid oo aad u xirfad xiiso leh in aad jeclaan doonaa si dhab ah. Interface waxaa xunna abaabulan iyo habka iibka waa xuduud lahayn, wax ka dhigaya Aldiko mid ka mid ah akhristayaasha buug ugu wanaagsan ee dhufto ee mobile.
Faa'iido: interface A xirfadeed, tan oo buugaagta ee maktabada iyo kuwa badan oo diyaar u ah oo lacag la'aan ah, wuxuu u baahan yahay xaddi yar yahay khayraadka
Qasaarooyinka: Qaar ka mid ah koob oo waa pricier badan dhufto ee kale.
Raaxeysanayo, waa codsi ugu xirfada buug download iyo maamulka, sida ay u maamusho si ay u bixiyaan tiro balaadhan oo ah muuqaalada iyo racfaan aad u xirfad leh waqti isku mid ah. Waa codsiga lacag la'aan ah, oo aad ku rakiban kartaa Saaxiibka telefoonka aad Android ka dibna waxa ay ku shuban ka raaxeysanayo, your computer ee sanamyadooda. App waa mid aad u fududahay in la isticmaalo, iyo natiijooyinka waa wax istaahila wakhtiga aad, sida inaad marwalba ku raaxaysan doonaa this qalab fiican wax akhriska.
Faa'iido: Waxaad ku dari kartaa buugaag sahlan, ma jiraan lacag dheeri ah, app waa lacag la'aan
Qasaarooyinka: Waxaa jira cayayaanka badan oo marka la isticmaalayo iyo waayo-aragnimo yar xun mararka qaarkood sabab la'aanta ah muuqaalada on Android
Top 5 Lugood Library Maareeyayaasha
Sida loo Beddelaan Napster in Lugood
> Resource > Lugood > Sida loo Tranfer Lugood eBooks in Android